Ọrụ iclọ Ọgwụ – Dawn Clinic
Tuesday Night – Medical & Dental (ndị okenye naanị)
Our free clinic is held on Tuesday nights. Anyị na-enye otu ụbọchị eleta 6:00 ka 8:00 pm. Ọ bụrụ na ị na-adịghị na otu oge atọrọ, anyị ga-ahụ ị na mbụ-abịa, mbụ na-eje ozi ndabere. DAWN is an interprofessionally run free clinic and is staffed by medical students, dọkịta, pharmacists, dental students and dentists, anụ ahụ na-agwọ ọrịa, nurses, social workers, and mental health professionals.
Friday Afternoon Clinic – ọgwụgwọ anụ ahụ (By Appointment Only2pm-5pm)
Chi ọbụbọ Clinic awade agbatiri ọgwụgwọ anụ ahụ ọrụ on Wednesday mgbede. Anyị na-ịhụ ndị ọrịa n'ihi na otu elekere emek inwale na-emeso ọhụrụ unan na-adịghị ala ala mgbu mbipụta, enye esịn idem ese enyịn mmega atụmatụ, ma melite ije na ọrụ.
Anyị nwekwara ike nyere aka na:
Navigating ahụike usoro